ပြည်သူတွေအတွက် အောက်စီဂျင်စက်ရုံဆောက်လုပ်ပြီး လှူဒါန်းမယ့်အကြောင်းပြောလိုက်တဲ့ နန္ဒာလှိူင် – Cele Top Stars
ပြည်သူတွေအတွက် အောက်စီဂျင်စက်ရုံဆောက်လုပ်ပြီး လှူဒါန်းမယ့်အကြောင်းပြောလိုက်တဲ့ နန္ဒာလှိူင်
ချစ်လှစွာသော ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးချောနန္ဒာလှိုင်းဟာဆိုရင် လတ်တလောမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကိုဗစ်ကြောင့် ကူးစက်ခံရသူတွေမှာ အောက်စီဂျင်တွေလိုအပ်နေကိစ္စကို ကူညီဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ အောက်စီဂျင်စက်ရုံဆောက်လုပ်ပြီး လှူဒါန်းပေးသွားဖို့ စီစဉ်နေတာ ပရိသတ်ကြီးတွေ သိရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါ..။
ဒီတစ်ခါမှာဆိုရင်လည်း နန္ဒလှိုင်က ပြည်သူအားလုံးအတွက် သတင်းကောင်းပါးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နန္ဒာလှိုင်က “ မင်္ဂလာ သတင်းပါ။အားလုံးလိုအပ်နေတဲ့ အောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံ တစ်ခုကို ဝယ်ဖို့ ရွေးချယ်လိုက်ပါပြီ။ အောက်ဆီဂျင် 50Nm3/h ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အတွက် တနေ့လျှင် 40L အိုးကြီး အလုံး ၂၀၀ ဖြည့်ပေးလို့ရပါတယ်။ လက်ရှိအနေအထားအရ အမြန်ဆုံးနဲ့ လူတွေ ပိုပြီးအကျိုးရှိစေမဲ့ အချက်ကို အဓိကထားပြီး ရွေးချယ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လိုအပ် နေတဲ့ပြည်သူတွေ ဆီရောက်ဖို့အတွက် ပေ (၂၀) ကွန်တိန်နာထဲထည့်ပြီး နေ့စဉ် လိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့ ရပ်ကွက် မြို့နယ်တွေကို ပတ်ပြီး ထည့်ပေးပါမယ်..။
ညဘက်ကျရင်လည်း ဇေကမ္ဘာ ဝင်းထဲမှာ ကားကို ရပ်နားပြီး ဖြည့်ပေးပါမယ်။ (၂၄) နာရီနီးပါးဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့ စီစဉ်ပါမယ်။ အခမဲ့ ဖြည့်ပေးမှာ ဖြစ်ပြီး နောက်ထပ်ခြေလှမ်းအတွက်လဲ ထပ်ကြိုးစားပါအုံးမယ်။တစ်ခုပဲ အားနာမိပါတယ်။ အမြန်ဆုံးရောက်အောင် ကြိုးစားထားပေမဲ့ အခုမှ စမှာတာဖြစ်လို့ နဲနဲတော့ စောင့်ရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ စိတ်မလျှော့ကြပါနဲ့။ ကျွန်မတို့လိုပဲ တခြားအလှူရှင်တွေလဲ မကြာခင်ပေါ်လာတော့မှာပါ။ကျန်းမာအောင်နေထိုင်ပေးကြပါရှင်……. ” ဟုဆိုပြီးပရိတ်သတတွေအတွက် ဝမ်းသားစရာသတင်းကောင်းပါလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသတင်းကိုကြားရတဲ့အတွက် ပြည်သူထဲကပြည်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မိပါတယ်။ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်း
Source ; Nandar Hlaing Facebook Acc
ခဈြလှစှာသော ပရိတျသတျကွီးရေ ပွညျသူခဈြအနုပညာရှငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ မငျးသမီးခြောနန်ဒာလှိုငျးဟာဆိုရငျ လတျတလောမှာ ဖွဈပျေါနတေဲ့ ကိုဗဈကွောငျ့ ကူးစကျခံရသူတှမှော အောကျစီဂငျြတှလေိုအပျနကေိစ်စကို ကူညီဖွရှေငျးနိုငျဖို့ အောကျစီဂငျြစကျရုံဆောကျလုပျပွီး လှူဒါနျးပေးသှားဖို့ စီစဉျနတော ပရိသတျကွီးတှေ သိရှိပွီးသားဖွဈမှာပါ..။
ဒီတဈခါမှာဆိုရငျလညျး နန်ဒလှိုငျက ပွညျသူအားလုံးအတှကျ သတငျးကောငျးပါးလိုကျတာပဲဖွဈပါတယျ။ နန်ဒာလှိုငျက “ မင်ျဂလာ သတငျးပါ။အားလုံးလိုအပျနတေဲ့ အောကျဆီဂငျြထုတျလုပျတဲ့စကျရုံ တဈခုကို ဝယျဖို့ ရှေးခယျြလိုကျပါပွီ။ အောကျဆီဂငျြ 50Nm3/h ထုတျလုပျနိုငျတဲ့အတှကျ တနလြေှ့ငျ 40L အိုးကွီး အလုံး ၂၀၀ ဖွညျ့ပေးလို့ရပါတယျ။ လကျရှိအနအေထားအရ အမွနျဆုံးနဲ့ လူတှေ ပိုပွီးအကြိုးရှိစမေဲ့ အခကျြကို အဓိကထားပွီး ရှေးခယျြလိုကျတာဖွဈပါတယျ။ တကယျလိုအပျ နတေဲ့ပွညျသူတှေ ဆီရောကျဖို့အတှကျ ပေ (၂၀) ကှနျတိနျနာထဲထညျ့ပွီး နစေ့ဉျ လိုအပျခကျြရှိနတေဲ့ ရပျကှကျ မွို့နယျတှကေို ပတျပွီး ထညျ့ပေးပါမယျ..။
ညဘကျကရြငျလညျး ဇကေမ်ဘာ ဝငျးထဲမှာ ကားကို ရပျနားပွီး ဖွညျ့ပေးပါမယျ။ (၂၄) နာရီနီးပါးဖွညျ့တငျးနိုငျဖို့ စီစဉျပါမယျ။ အခမဲ့ ဖွညျ့ပေးမှာ ဖွဈပွီး နောကျထပျခွလှေမျးအတှကျလဲ ထပျကွိုးစားပါအုံးမယျ။တဈခုပဲ အားနာမိပါတယျ။ အမွနျဆုံးရောကျအောငျ ကွိုးစားထားပမေဲ့ အခုမှ စမှာတာဖွဈလို့ နဲနဲတော့ စောငျ့ရလိမျ့မယျထငျပါတယျ။ စိတျမလြှော့ကွပါနဲ့။ ကြှနျမတို့လိုပဲ တခွားအလှူရှငျတှလေဲ မကွာခငျပျေါလာတော့မှာပါ။ကနျြးမာအောငျနထေိုငျပေးကွပါရှငျ……. ” ဟုဆိုပွီးပရိတျသတတှအေတှကျ ဝမျးသားစရာသတငျးကောငျးပါလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီသတငျးကိုကွားရတဲ့အတှကျ ပွညျသူထဲကပွညျသူတဈယောကျအနနေဲ့ ဝမျးမွောကျဝမျးသာဖွဈမိပါတယျ။ဖတျရှုပေးကွတဲ့ပရိတျသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုမှနျကောငျးတောငျး